Indlela yokubonisa intombazana ukuba ufuna ukuba yintombi yakhe?
Ukubukela amanyathelo okuqala abafana nabasetyhini abazenzayo xa besakha ubudlelwane, umntu unokuchukumiseka kuphela. Kwaye emva koko, sasiye safana. Amagama angaqinisekanga, amahloni ahlekisayo, amanqaku ahlekisayo kunye neengqumbo, amaqatha aqaphelayo kunye nokuwanga
Kodwa uyayikhumbula njani ukuba kwenziwe umgudu omkhulu ukufezekisa intlanganiso efunwayo, okanye inombolo yefowuni. Kwaye nangona oko kusebenze, kwakulindeleke ngakumbi ukulindela nokuxhalaba ngokweqile.
Kodwa amava okuqala ayiphumelelanga ngaso sonke isikhathi, nto leyo ibangela ukuba abantwana bavelele. Iengqondo zanamhlanje zenze isinyathelo esikhulu ekufundeni ukuphuhliswa kobudlelwane, kubandakanywa nokuqala. Kukho ubuchule obuninzi, ubuchule kunye neemfihlo ukuba abantu abancinci kufuneka babe lula ukuthatha inyathelo lokuqala, ukutsala ingqalelo kubo, kunye nokuseka uqhagamshelwano kunye nesini esahlukileyo.
Ngokuqhelekileyo iimeko ezixinzelelekileyo zifunyanwe ngabafana, kuba, njengesiko, kufuneka bafune ingqwalasela yintombi yentliziyo yakhe, kungekhona inzuzo. Kodwa oko kungenziwa njani? Indlela yokubonisa intombazana ukuba ufuna ukuba yinkwenkwe yakhe, kodwa ke ungenzi iphutha?
Ufuna ntoni kwintombazana
Kukho iingcebiso malunga no-donjuan oqalayo, makhe sijonge.
Inombolo yeBhunga 1.
Ukuze ubonise intombazana ofuna ukuba nayo, kufuneka uqale ugxile kuye. Ngokuqhelekileyo abafana bacinga ukuba ukuze ujabule kubalulekile ukuba ube mnandi, uthandane kwaye ngamanye amaxesha udibanise. Kodwa ngenxa yesizathu esithile, wonke umntu uyalibala ngokuthanda kwabasetyhini "ababi". Bayeke kwaye bangaba yintombi yentliziyo ebomini, kodwa amava okunxibelelana nomntu onjalo kumphefumlo ufuna ukufumana wonke umntu. Ngokuqhelekileyo amadoda alolu hlobo athatha ukuziphatha kwawo okungenakuvinjelwa, uhlobo oluthile lokuhlambalaza, ukungahambi kakuhle, ukubonakalisa ngokuthe ngqo iminqweno. Khumbula ukuba ibhinqa kunoma yimuphi umdala ngumzingeli wemvelo, kwaye akayidingi ixhoba, elaliqhekeza kwaye ilungele ukusetshenziswa. Ngokuhamba kwexesha, kuya kubakho ukuhlaziywa kwemilinganiselo yobomi, kodwa ekuqaleni ibhinqa, kunye nendoda, kufuneka ithatyathwe. Ewe, kwaye uya kuvuya ukuzibona njengomqoqo, ngenxa yokulimaza abalandeli abaninzi, uyayikhetha.
Ngoko ke, ukuba ukukhuliswa kunye nokusebenza kwamakhono kuvunyelwe ukuzalwa kwakhona - yenza okuthile. Kungekudala uza kubona umdla wokuzingela emehlweni okhethiweyo wakho.
Inombolo yeBhunga 2.
Khumbula ukuba ubuntu bentombazana abukho ngqo, kwaye impendulo ngu "ewe, hayi, mhlawumbi" - kunoko umgaqo ngaphezu kweyodwa. Ngoko fundani ukufunda phakathi kwemigca nokwenza. Ngokuqhelekileyo ekusebenzisaneni nokuziphatha okunjalo, umfazi uzama ukugcina isabelo senzuzo kwaye ngaloo ndlela unike indoda ilungelo lokukhetha kunye nenkululeko yokuthatha isenzo. Qhubeka, kodwa ungakhathazeki, amantombazana abathanda xa bebuzwa. Ukuba usenokufumana amandla okumnceda uze umemele ngosuku, uze uye ngasekupheleni, ngaphandle kokumisa emva koko "akukho," mhlawumbi akunako. " Kule binzana, kugxininiswa ngakumbi "mhlawumbi" kunokuthi "cha." Unganqikazi ukufumanisa isizathu, kwaye unike iingxabano ezininzi ukuthanda ukuhamba nawe. Izizathu ezinokuba yiyona nto ibaluleke kakhulu: uyayazi iphuzu nge-ayisikrimu enomnandi kakhulu okanye i-sushi, ukukhutshwa kwefilimu entsha, umnqweno wokuthetha ngento ebalulekileyo, okanye ukuba inkampani iphakathi kwezi zibini, kwaye ungathanda ukuba ngoku kusihlwa kunye nawe. Unokucela uncedo ngaphandle kokuzisola, ukuthobela ingqalelo, umzekelo, kwintetho yakhe entle kwiingubo, umculo, iifilimu, imfesane xa ukhetha izipho, bonisa intombazana into oyifunayo kuyo. Abafazi bathanda kakhulu ukunceda abantu. Kwaye akukho nto iya kukuthintela, emva kokuthengwa ngempumelelo, "hlamba" into entsha kwikomityi yetiyi kwi-cafe oyikhonzile.
YeBhunga inombolo 3.
Ngamanye amaxesha awukwazi ukufumana intombazana ngokukhawuleza. Ngokuqhelekileyo, ngaphambi kokuya kwiqeshwa elide elilindileyo, kwaye wena kunye nentombi yentliziyo utshintsha amaqabane amaninzi, kwaye kukho imitshato. Kodwa ngeli xesha, ngelixa intombazana ngesizathu esithile ayifumanekanga, zama ukuzenzela indima, apho ubuhlobo bufana nohlanga lomdlalo. Kwaye inani lamantombazana phantsi kwe "tick", lidlula nayiphi na ingcamango yesiqhelo. Amadoda anjalo akhathazeka kwaye athanda abafazi. Kuyatshitshisa, inyaniso yokuba, ukuya kwintlanganiso, intombazana iyaqonda ngokucacileyo oko kuya kuphelisa, kwaye ngaloo mini akukho mntu uya kumbiza. Kodwa yonke into iyahamba, kwaye ilungiselela ngokunyanisekileyo. Kwaye kubangele ithuba elinjalo ukuba okungenani uzame njengoko kunjalo, makusasa ngokusasazela nokucaphukisa. Kwakhona, amadoda anjalo angakhuthazi ukuzithemba, kwaye iimpembelelo zakho zenyama aziyi kuncitshiswa kwiinjongo ezinzulu, kodwa nje njengendlela yokuwina.
Iphupha # 4.
Ukuba into enzima kunayo yonke, ayithethi ukuba ufuna ukuphumla. Usuke unomhlangano ongaphezu kweyodwa, kodwa awupheli njengoko ungathanda. Ngokuqhelekileyo ezimbalwa zezibini ziqala ukudibana emva kokunikezelwa ngokusemthethweni, onke amagama atshintsha indawo yokubamba kuqala. Ngoko ke, indlela engcono kakhulu yokubonisa intombazana ukuba ufuna ukuba yinkwenkwe yakhe yinto enomdla. Ngokuqhelekileyo kunelungelo lokulinda umzuzu othile, xa uya kuhlala u-tete-tete. Uphawu oluphambili lokuba intombazana ayinakucinga ukuziphatha kwakhe. Ngokuqhelekileyo kwiimeko ezinjalo abagijimali ukugibela emnyango, baqala ukubulela ngokuhlwa, ngelixa, ukudubula amehlo abo, baqala ukudibanisa into ethi "Hayi, ndaya .." okanye "Ndilindele kakade umama," " uya kubiza njalo njalo. Ukuba uyaphawula lo msebenzi. Umzuzwana onjalo awukwazi ukuchithwa, kwaye ke yonke into iya kugqitywa yodwa, ngaphandle kwamazwi angenanto.
Iphulo # 5.
Emva kokuba zonke izinto sele zigqitywe, kwaye unakho ukuziqhayisa ngokuzibhenela, ungatshintshi ikhosi yakho, ungasuki kumsebenzi wolwalamano, nokuba yonke into ayifani naleyo. Musa ukuzama ukufumana intombazana. Iimbono eziphosakeleyo zamadoda kukuba ukuba zivumelene nolwalamano, ke aluyi kuhamba naphi na. Ukuguqulwa kokuziphatha ngokukhawuleza, kunokubangela ukungahloneli, nokungaqondi. Kwaye ngoko, ukuqhubeka kobudlelwane kunye nentetho ayikwazi. Ngoko ke, ukuba intombazana inomdla kakhulu kuwe, xabisa ixesha xa unye kunye, unakekele iimvakalelo, uze ufumane umxhelo kuphela kulwalamano.
Ukutshatyalaliswa ngaphandle kwamagama: ukunyamezela kunye nokuthinta
Indlela yokukhohlisa umntu: ubugcisa bokukhohlisa
Kholelwa kuwe kwaye uzithande
I-curd pudding kunye neetamatato
Kuthekani ukuba andinakuwamkela umfana wam?
Kungcono ukuba ulale umfazi okhulelwe
Ukupheka kwonyaka omtsha kwiitya ezimnandi
Nceda uFeng Shui ekukhulelweni komntwana
I-summer panama-bell kunye nezandla zabo
Ukutya ekhaya: zokupheka kwipikiniki
Izinja ezishushu kunye nesiliva esidliwayo, ikhukhamba kunye netamatato
Ijoghu jelly kunye namajikijolo